ပြုစုပျိုးထောင် မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင် | International IDEA
အခြေခံအဆင့် ပြည်သူ့နီတိ သင်ရိုး - ဆရာလက်စွဲ
Home / Publications / Training materials / ပြုစုပျိုးထောင် မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်
ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ဆရာများအတွက်လည်း သင်ကြားရေးတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဆရာမှတ်စုများ ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤစာအုပ်သည် လူငယ်များကို ဒီမိုကရက်တစ် စံနှုန်းများနှင့် တန်ဖိုးများကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် မျိုးဆက်သစ်မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဓိကသဘောတရား၊ အတွေးအခေါ်နှင့် အကြောင်းအရာများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ၄၅ မိနစ်ကြာ သင်ခန်းစာ ၁၂ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာတစ်ခု၊ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်သင်ခန်းစာ ကိုးခုနှင့် ရှေ့ပိုင်း သင်ကြားချိန်များမှ သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်မှတ်မိစေရန် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း နှစ်ခန်းပါဝင်ပါသည်။ ဤသင်ရိုးသည် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် အရေးကြီးသော အသိ၊ စွမ်းရည်နှင့် တန်ဖိုးများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ကူညီပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့အား ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် အစီအစဉ် (STEP Democracy) ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် International IDEA မှ ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
This curriculum is designed for the young students with facilitation notes to help guiding the teachers as they deliver the work. This curriculum aims to engage youth through introducing them to democratic values and principles fromayoung age so as to foster new voters and leaders in generations to come.
This book is divided into twelves, 45-minute sessions to introduce the students to key concepts, ideas and issues related to democracy. It includes one introductory session, nine thematic sessions, and two review sessions designed to help students remember and review material they have covered in previous sessions. This course will help the students develop the knowledge, skills and values that are important for democratic citizenship.
This publication is produced by International IDEA as part of Support to Electoral Processes and Democracy (STEP Democracy) Program funded by European Union.
သင္ခန္းစာ ၁ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း
သင္ခန္းစာ ၂ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမွဳ
သင္ခန္းစာ ၃ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း
သင္ခန္းစာ ၄ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
သင္ခန္းစာ ၅ - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
သင္ခန္းစာ ၆ - ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
သင္ခန္းစာ ၇ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ
သင္ခန္းစာ ၈ - အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင္ ့ဝတၱရား
သင္ခန္းစာ ၉ - ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ
သင္ခန္းစာ ၁ဝ - သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
သင္ခန္းစာ ၁၁ - ဒီမိုကေရစီတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑
သင္ခန္းစာ ၁၂ - ေနာက္ဆံုးျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
International IDEA အေၾကာင္း